Madaxweynaha dalka oo la kulmay Wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Catherine Ashton- SAWIRRO
Madaxweynaha dalka oo la kulmay Wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Catherine Ashton- SAWIRRO Mogadishu Isniin 27 August 2012 SMC
(Mogadishu, Somalia, Aug, 27, 2012) Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa la kulmay wakiilka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo siyaasadda ammaanka Catherine Ashton iyo wafdi ay hoggaamineysay.
Kulankan oo ay ka qeyb galeen guddoomiyaha KMG ah ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Generaal Muuse Xasan, R/wasaaraha Dalka Dr. C/wali MaxamedCali iyo afhayeenkii hore ee Baarlamaanka mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaa looga hadlay dhammeystirka marxaladda KMG ah, sida ay wax u socdaan iyo siyaasadda Midowga Yurub ee dalkan Soomaaliya.
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo ay garab taagan yihiin masuuliyiinta kulanka kala qeyb gashay ayaa sheegay in Catherine Ashton ay ballan qaadday in Midowga Yurub uu sii wadi doono isla markaana xoojin doono taageerada ay siiso dalka Soomaaliya. Sidoo kale kale madaxda Soomaalida ayaa uga mahad celiyay Midowga Yurub taageerada ay siiyeen waddanka.
Dhammeystirka marxaladda KMG ah ayuu madaxweynuhu ku sheegay inay horseed u tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka gudbaan dhibaatada muddada dheer heysatay, sidaa darteedna loo baahan yahay in qof kasta ay taageerto hannaankan dib loogu dhisayo dowlad dhammeystiran oo hanata waajibaadkeeda, ayadoo loo marayo waddo nabadeed oo xoojineysa horumarka dalka ka jira iminka.
Mogadishu, Somalia media@presidency.gov.so